राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारण गर्यो एक हजार ४९ परीक्षा केन्द्र — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारण गर्यो एक हजार ४९ परीक्षा केन्द्र
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्धारण गर्यो एक हजार ४९ परीक्षा केन्द्र
त्यसैगरी, बोर्डले मंगलबारदेखि परीक्षाको प्रश्नपत्र छपाइ शुरु गरेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा गोप्य प्रेसमा कक्षा ११ र १२ को प्रश्नपत्र छपाइ शुरु भएको बोर्डकी प्रवक्ता सत्यालले जानकारी दिईन्।
२०७४ फागुुण ३० गते ०९:४४ मा प्रकाशित
ब्याजदर समस्या समाधानमा राष्ट्र बैङ्कले चाल्यो कदम, रिपो मार्फ २० अर्ब वित्तीय बजारमा
कस्ता पर्यटकले नेपालमा बढि घुम्न मन पराउँछन् ? जान्नुहोस्
बेलायती राजकुमार एक दिन अगावै नेपाल आउँदै, के के गर्नेछन् उनले ?
नेपालगञ्ज, बुटवल, नारायणगढ, बनेपा, बिराटनगर वा बिर्तामोड, कहाँ हुनुहुन्छ तपाई ?
पन्ध्र सय सेयर सदस्य भएको संस्थालाई बचाउन सरकारले दिने भो ३० करोड !